Alatsinainy 16 Novamb 2020 – FJKM
Alatsinainy 16 Novamb 2020
Finoana miseho amin’ny asa
Anisan’ny Apostoly nanao ny asa ho zava-dehibe amin’ny asasorany Jakoba . Aminy , ny tena kristiana dia izay misy sy miasa ho an’Andriamanitra ka manasoa ny mpiara-belona aminy . Araka izany ,ny tena mino dia :
1- Maneho ho hita maso ny finoany (and14)
DIEM « inona moa no soa azon’ny olona milaza azy ho manam-pinoana raha tsy miseho amin’ny asa izany ? »
Avy amin’izao andinin-tSoratra Masina izao isika no mahita fa hay ny asa no endrika ahitana imaso ny finoana izay tsy hita maso . Azo atao tsara araka izao ny maneho ny finoantsika an’i Jesoa ho hita maso . Koa ny asa ataontsika no maneho ny finoantsika . Ny asa fanasoavana ny hafa rehetra dia tena fanehoana ny finoana an’iJesoa izay inoana no aseho amin’ny alalan’ny fanaovana sy ny fanohizana ny asany eto amin’izao tontolo izao .
2-Miasa tsara (and17)
Tsara ihany ny mitondra fanazavana ho antsika « Protestante Reformé » dia mino aloha isika vao miasa;Ilay finoana no miteraka asa. Tsy izy ny mifamadika amin’izany . Ny finoana tsara mantsy no miteraka asa tsara . Araka izany dia aoka hozava-dehibe amintsika aloha ny finoana. Izany rahateo no hamonjena antsika. Koa izay mino ary miasa no afaka miandrandra famonjena . Ilay finoana tao amin’i Abrahama no nahatonga azy hanolotra ny zanany ho an’nyTompo . Izany koa no hitaomana antsika ankehitriny . Aoka ho mafy orina tsara ny finoana mba hiteraka asa tsara izany . Mila olona toy izany ny Fiangonana sy ny firenena.
Inona avy no asa tsara ateraky ny finoana marina an’iJesoa ?